MM Dr Abiyi Ahimad: ''Uummata yoo qeensa buqqisan hin mariisisiin keessa dhokkochuuf yaalu'' - BBC News Afaan Oromoo
MM Dr Abiyi Ahimad: ''Uummata yoo qeensa buqqisan hin mariisisiin keessa dhokkochuuf yaalu''
Ministirri Mummee Dr Abiy Ahimad har'a waajjira isaaniitti oggantoota paartilee siyaasaa adda addaa waliin waa'ee jijjirama amma gaggeeffamaa jiraniifi filannoo bara dhufuu ilaalchisuun marii taasisaniiru.
Haaluma waamicha torban darbe taasifameetiinis, paartileen siyaasaa dhimmoota mummee itti fufuun raawwachu qaban irratti mariin taasifameera.
Xiyyeeffannaan marichaa inni guddaanis filannoo itti aanuufi waa'ee jijjirama ammaan tana biyyattii keessatti taasifamaa jiru yaa ta'u malee, ministirri mummee motummaan isaanii sochii seeraafi heera kabachiisuuf fudhataa jiruu cimsee kan itti fufu ta'u beeksisaniiru.
Kana malees, Dr Abiyi tarkaanffiin motummaan olaantummaa seeraafi heeraa kabachiisuuf fudhataa jiruu kan saba tokko irratti xiyyeefateedha jedhamuun sirrii miti jedhaniiru.
Sochiin tibbana taasifamaa jiru kanneen sarbama mirgoota namoomaa raawwataniifi hanna qindoome raawwatan seeratti dhiyeessuudha. Kannen haala akkasii keessatti hirmaatan hundinu waan gaafatamniifuu sabummaa waliin walqabsiisuun sirrii miti kan jedhan ministirri Mummee, wayita yakka raawwatan ummata kan hinmariisisiin balleessite jirta yoo jedhaman saba waliin walitti qabsiisuun balaafamaa ta'u himaniiru.
''Qeensa yeroo buqqisan ummata kan hin mariisiisine, qeensa buqqiisuun seeraan ala yoo jennuun ummata keessatti dhokachuuf yaalu,'' jechuun tarkaanffiichi kan fudhatame namoota dhunfaa qofarratti ta'u himaniiru.
Haaluma yaada ministirri mummee dhiyeessaniin, mariin paartilee siyaasaa waliin gaggeeffamu sadarkaa sadiitti qoodama. Sadarkaa tokkooffaan mariicha eegalchiisu yoo ta'u, sadarkaa lammaaffaan ammoo dhimma filannoo irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Inni sadaffaan ammoo hpojiiwwan filannoon booda raawwataman irratti kan xiyyefatu akka ta'u ministirri Mummee dubbataniiru.
Akka Ministirri Mummee Abiy jedhanittis, filannoon itti aanuu, bilisa, haqa qabeessaa fi dimokraatawa gochuuf akka hijjatanii fi kanaafis seera filannoo, moggaasa Boordii filannoo fi naannoo dandettii boordii filannoo irratti hojii barbaachisaan ni raawwatamas jedhaniiru.
Labsiin filannoo, labsiin galmee paartilee siyaasaa, labsiin naamuusaa paartilee siyaasaa, ogeessotaan qoratamee karaa abbaa alangaa waliigalaa foyyeessuudhaaf wixeen qophaa'era. Haata'u malee, paartileen siyaasaa irratti mariyachuun waan barbaachisuuf jecha paarlaamaatiif hin dhiyanne jedhan.
Dhaabbileen sabaa himaaleen karaa seera qabeessa ta'een akka hojjetaniif seerri mijataa ta'ee hojjechiisu akka qophaa'u himanii miidiyaaleen hawwaasummaa filannoo itti aanutti qormaata akka ta'an dubbataniiru.
Rakkoo kana dura dhaabbachuudhaan ittisuudhaafis paartilee siyaasaa waliin ta'anii akka hojjetan kaasan.
Waanti biraan isaani ibsan, paartileen siyaasaa fuula miidiyaa hawwaasummaa seera qabeessa ta'e qabaachuun akka isaan barbaachisudha. Kun ta'uun ammoo ergaawwan maqaa isaanittiin ba'anii walitti bu'insa uuman ta'achuudhaaf akka dandeesisu kan ibsan.
Heera mootummaa foyyeessuufi ijaarsi dhaabbilee ilaalchisee hojiiwwan hojjetaman kan dubbatan Ministirri Miimichaa, Heera mootummaa foyyeessuudhaaf mariin akka barbaachisuufi dhimmoota falmii kaasan irratti filannoo booda murteen uummataa akka irratti kennamu akka taasisan ibsaniiru.
Waa'ee yeroon filannoo akka achi siqu ilaalchisee yaada ka'e irratti Ministirri Muummee Dr. Abiy akka dubbatanitti, yeroon filannoo akka achi siqu yaadni ifatti dhiyaate akka hin jirre heeranii, yaadni akkasii yoo dhiyaate garuu irratti mariyatamee waliigalteedhaan murtee dabarsuun akka danda'amu dubbatan.
Ministirri Muummichaa dabalataanis paartileen lakkoofsaan hedduu ta'anii dhiyaachuurra walitti dhiyaatanii hojjechuudhaan walitti makamanii tokko ta'uu baatanillee adda tokko uumanii jabaatanii akka dhiyaatan gorsuun, mootummaan karaa kanaan gargaarsa barbaachisu akka taasisu abdachiisaniiru.
Paartileen siyaasaa ammarraa eegalanii filannoo dhufuuf akka qophaa'iuu qaban yeroo dubbatan, "Paaspoortiin tarsa'u yoo jiraate dadddafaa tarsaasaa" jechuun gorsaniiru.